Kwazisai | Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano
Sangano redu rakavambwa muna Chikunguru 62 nekuda kwekusimudzira tsika muOta Ward.Kubva Kubvumbi 22, rave iro Ota Ward Tsika Yokusimudzira Sangano kusvika nhasi.
Isu tinobata uye tinoshandisa zvivakwa zvetsika nehunyanzvi senge Ota Citizen's Plaza, Ota Citizen's Hall Aplico, uye Ota Bunkanomori semaneja akasarudzwa, kutsigira mabasa ekuzvidira evagari, uye nekupa mikana yepamusoro yekutarisa.Tiri kuvandudzawo mabhizinesi edu pachedu munzvimbo dzakasiyana senge mimhanzi, theatre uye hunyanzvi.Mubhizimusi redu rekuzvidira, isu hatiganhurirwi kumitambo uye kuratidzira munzvimbo ino, asi tiri kushingairira kusimudzira kuedza kubuda, sekumisikidza danho munzvimbo uye kuita bhizimusi rekutakura.Zvakare, isu tiri kuyedza kusimudzira tsika nemagariro kuburikidza ne "kubatana-kusika" uye kubatana pamwe nevanhu venzvimbo nemasangano akadai sewadi.Pasi pekupararira kweiyo nyowani coronavirus hutachiona, iyo yaive yekuvhundutsira kwetsika neunyanzvi, isu takashandawo kugadzira nzira nyowani dzekumisikidza bhizinesi senge kusimudzira kutapurirana pamhepo.
Mune manejimendi uye mashandiro edzimba dzechirangaridzo dzakadai seRyuko Memorial Hall, Kumagai Tsuneko Memorial Hall, Ozaki Shiro Memorial Hall, uye Sanno Kusado Memorial Hall, isu tichaenderera mberi nekudzamisa tsvagiridzo yedu pamunhu wega wega pendi, calligrapher, munyori wenhau, uye mutsoropodzi. Kuwedzera pazviratidzwa, tiri kusimudzira mabasa ekuparadzira zvakabudirira mukati nekunze kwewadhi nekuita mashopu, kufambisa mabasa padandemutande, nekukweretesa kumamwe mamuseum.
Sechido cheveruzhinji chakabatanidzwa hwaro, musangano wedu ucharamba uchitora danho mukusimudzira zvirongwa zvetsika nehunyanzvi, uye zvichabatsira mukugadzirwa kwedhorobha uko vagari vanogona kuwana hupfumi hwehupenyu hwavo hwezuva nezuva.Tinoda kukumbira vagari vemuwadi kuti vawedzere kunzwisisa, rutsigiro pamwe nekubatana.
Sachigaro Masazumi Tsumura
Zvivakwa zvesangano redu
Sangano redu rinotarisira zvivakwa zvisere zvinotevera semaneja akasarudzwa kana manejimendi wevatariri anobva kuOta Ward.
Dzvanya Kanade Hibiku
Muna Chikunguru 29, mubatanidzwa wakapemberera makore makumi matatu.Munguva ino, takaedza kusimudzira tsika neunyanzvi muOta Ward, uye takabatsira mukumutsiridza matunhu nekusimudzira dhorobha.Izvo zvinonyanya kudiwa nesangano kuwedzera denderedzwa rekubatana pamwe nekubatana pakati pevagari vewadhi kubudikidza netsika uye nekupa ku "hupfumi" hwevanhu.
Panguva yechiitiko chegumi nemakumi matatu ekutanga kwedu, takaratidza huzivi uhwu nechiratidzo uye chirevo chekubata.Isu takavandudza kutsunga kwedu kubatsira munharaunda nekubatanidza maveketa emunhu wese ane chekuita nezviitiko zvesangano, tichiwedzera kusimbisa kuedza kwesangano mune ramangwana.
Tichagadzira mabhizinesi kuitira kuti vanhu vagone kurota nezveramangwana kuburikidza nehunyanzvi hwetsika, kuzadzikisa tarisiro yavo, uye kuramba vachikurukura nemoyo yevanhu vazhinji kuti mubatanidzwa uve "kiyi" yekuronga "fan".
Dhirowa zviroto zveramangwana kuburikidza nehunyanzvi hwetsika, tamba tariro,
Tichaedza kuramba tichifarira mwoyo yevagari vazhinji.